आज मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने, को-को हुँदैछन् मन्त्री? - HKNepal.com - First Nepali Internet Magazine Hong Kong | एचकेनेपाल डट कम
आज मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने, को-को हुँदैछन् मन्त्री?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सोमबार नसकिएका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको भन्दै मंगलबार (आज) गर्ने जनाएका छन्।
देउवाले सोमबार दाहाललाई फोन गरी मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने जानकारी गराएका हुन्। आइतबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको छलफलमा देउवाले सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने वचन दिएका थिए। दाहालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा धेरै ढिलाइ भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका थिए। पार्टी बैठकमै सरकार सुस्त भएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको चर्को आलोचना भएको खबर कान्तिपुरमा छापिएको छ।
देवकोटा प्राय: भन्थे – ‘म मर्न चाहन्छु’
लोडसेडिङ हटाउने सबै कार्यक्रममा अवरोध, हिउँदमा लोडसेडिङ हुने सम्भावना
Trending Now : पुननिर्माणका लागि भारतले दियो साढे दुई अर्ब